လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင် ရင်း ကလေးမြို့ တွင် ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းလေးဦး အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ သက်မွန်မြင့် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင် ရင်း ကလေးမြို့ တွင် ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းလေးဦး အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ သက်မွန်မြင့်
လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင် ရင်း ကလေးမြို့ တွင် ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းလေးဦး အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ သက်မွန်မြင့်
သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်ကတော့ ပရိသတ်တွေ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ချစ်ခင် အားပေးနေရတဲ့ ပြည်သူချစ်မင်းသမီးတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်း အမြဲအလေးထားသူဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးက သူမရဲ့စိတ်ထားလေးကို လေးစားနေကြတာပါ။ ချစ်သက် ကတော့ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အနုပညာရှင်များနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကြားထဲကနေ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းပေါ် ထွက်ကာ ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်တရားတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုမှာလည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရင်း ကလေးမြို့တွင် ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းလေးဦး အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေကြောင်းကို ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမှာရှိတဲ့ ပြည်သူ(၄) ဦးနဲ့ ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့ ပြည်သူအယောက်(၃၀) အတွက်လည်း စိတ်ပူနေတာပါ။ ” ကလေးမြို့လေးမှာ သုံးသွားတဲ့ လက်နက်တွေက😭😭😭 ပြည်သူတွေကို အဲ့လောက်တောင်လား အဲ့လောက် လိုလားရှင်! တကယ်ဆို ငါတို့ ကလေးမြို့လေးက သေးတယ်ဆိုရင်လည်း ပြောလို့ရတဲ့မြို့လေး တစ်ခုပါ ဘဲ… တူမီး သေနတ်အားပြုတဲ့ ဖက်ဒရယ်တိုင်းရင်းသားတွေ ကို RPG Bomb တွေ G3 တွေ Sniper တွေ Machine Gunတွေ သုံးပီးဖွိုခှဲသှားတာတော့ တောျတော့ျကျိုလှနျပါတယျ..
ငါတို့ရဲ့ရင်ထဲထိကိုနာကျင်ရပါတယ် ဒီနေ့ ကျဆုံးသွားတဲ့ အာဇာနည် 🥀 မအားခူ မောင်ဆန် းသဲ မောင်သားချစ် ကိုထန်ဟောင်လျန်း သူတို့ကတော့တာဝန်ကျေနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပီ 💔 စိုးရိမ်ရအခြေနေ ( ၄ ) ဦးနဲ့ ဒဏ်ရာရရှိသူဦးရေ ၃၀ ကျော်အတွက်ကိုလည်း ဆုတောင်းပေးနေရပါတယ် ခုထိလည်းအခြေနေက မငြိမ်သေးပါဘူး သေနတ်သံတွေကကြားနေရဆဲပါဘဲ… media အားနည်းတဲ့ မြို့လေးမို့ speak out လုပ်ပေးကြပါဦးရှင်🙏🙏🙏” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ ခ်စ္ခင္ အားေပးေနရတဲ့ ျပည္သူခ်စ္မင္းသမီးတစ္လက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြအေပၚမွာလည္း အၿမဲအေလးထားသူျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလုံးက သူမရဲ႕စိတ္ထားေလးကို ေလးစားေနၾကတာပါ။ ခ်စ္သက္ ကေတာ့ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့ ၾကားထဲကေန ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ လမ္းေပၚ ထြက္ကာ ရင္ထဲက ဆႏၵအမွန္တရားေတြကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုမွာလည္း သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာပါဝင္ရင္း ကေလးၿမိဳ႕တြင္ က်ဆုံးသြားတဲ့ သူရဲေကာင္းေလးဦး အတြက္ စိတ္ထိခိုက္ဝမ္းနည္းေနေၾကာင္းကို ေရးသားထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနမွာရွိတဲ့ ျပည္သူ(၄) ဦးနဲ႔ ဒဏ္ရာရရွိထားတဲ့ ျပည္သူအေယာက္(၃၀) အတြက္လည္း စိတ္ပူေနတာပါ။ ” ကေလးၿမိဳ႕ေလးမွာ သုံးသြားတဲ့ လက္နက္ေတြက😭😭😭 ျပည္သူေတြကို အဲ့ေလာက္ေတာင္လား အဲ့ေလာက္ လိုလားရွင္! တကယ္ဆို ငါတို႔ ကေလးၿမိဳ႕ေလးက ေသးတယ္ဆိုရင္လည္း ေျပာလို႔ရတဲ့ၿမိဳ႕ေလး တစ္ခုပါ ဘဲ… တူမီး ေသနတ္အားျပဳတဲ့ ဖက္ဒရယ္တိုင္းရင္းသားေတြ ကို RPG Bomb ေတြ G3 ေတြ Sniper ေတြ Machine Gunေတြ သုံးပီးဖြိဳခွဲသွားတာေတာ့ ေတာ်ေတာ့်က်ိဳလွန်ပါတယ်..
ငါတို႔ရဲ႕ရင္ထဲထိကိုနာက်င္ရပါတယ္ ဒီေန႔ က်ဆုံးသြားတဲ့ အာဇာနည္ 🥀 မအားခူ ေမာင္ဆန္ းသဲ ေမာင္သားခ်စ္ ကိုထန္ေဟာင္လ်န္း သူတို႔ကေတာ့တာဝန္ေက်ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပီ 💔 စိုးရိမ္ရအေျခေန ( ၄ ) ဦးနဲ႔ ဒဏ္ရာရရွိသူဦးေရ ၃၀ ေက်ာ္အတြက္ကိုလည္း ဆုေတာင္းေပးေနရပါတယ္ ခုထိလည္းအေျခေနက မၿငိမ္ေသးပါဘူး ေသနတ္သံေတြကၾကားေနရဆဲပါဘဲ… media အားနည္းတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးမို႔ speak out လုပ္ေပးၾကပါဦးရွင္🙏🙏🙏” ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာပဲ ျဖစ္ၿပီးပရိသတ္ေတြအတြက္ ဒီသတင္းေလးကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္ေနာ္။
Previous post အဆင်ပြေတဲ့ အိမ်တွေက လောင်းတဲ့ဆွမ်း ကို အဆင်မပြေ တဲ့ အိမ်တွေ ကို လိုက်ဝေပေး နေတဲ့ ကိုရင်လေးတွေ..
Next post ဝမ်းသာ စရာ သတင်းကောင်းပါ ဟန်လေး ကို မြန်မာ ပြည် ပြန်မလွှတ်သေးဘဲ TOP5အလှမယ် များ နဲ့ အတူ ထိုင်းမှာ နေခွင့်ပေးသွားမယ် ဆိုတဲ့ MISS GRAND INTERNATIONAL FAMILY